Nhau dzakaipa dzeAdobe. Dhinda rekuburitsa uye zvemukati ichivharira | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwegore hazvichagone kutsvaga zvemukati zveGoogle paGoogle
Nhau dzakaipa dzeAdobe. Gumiguru yakanga isiri mwedzi wakanaka kukambani. Kunyangwe hurumende yeUnited States kudzoserwa nechiyero chakadzivirira kupihwa kwemasevhisi kune vashandisi veVenzuelan, matambudziko matsva akaonekwa padhuze.
Ivo vanofanirwa kuita kune rumwe ruoko nayeSarudzo yeGoogle yekusaratidza Flash zvirimo muinjini yekutsvaga uye a nyowani mushandisi data inodonha.
1 Ndeapi mashoko akaipa eAdobe?
2 Dhata leakage
Ndeapi mashoko akaipa eAdobe?
Ngatitangei nechiziviso chakaitwa naDong-Hwi Lee, mukuru weGoogle mainjiniya.
Kutsvaga kweGoogle inomira kutsigira Flash gare gare gore rino. Pamapeji ewebhu ane Flash zvemukati, Google icharegeredza Flash zvirimo. Mutsvagiri inozomira indexing yakamira yega SWF mafaera. Vazhinji vashandisi nemawebhusaiti havazoone chero chinetso kubva kushanduko iyi.
Ini ndinoreurura kuti nhau dzakaipa dzinogona kutaridza sekuwedzeredzwa. Firefox, Chrome uye Microsoft mabhurawuza havachaitsigire. Muchokwadi, Adobe yakavimbisa kuuraya mutambi wayo wenhau mukupera kwegore rinotevera. Ndiwo mhedzisiro yemaitiro akatanga muna 2010 apo Steve Jobs akaramba kuramba achimutsigira pane zvaaigadzira. Apple yaive mudiwa weAdobe mu graphic dhizaini uye multimedia yekugadzira indasitiri.
Izvo zvakare hazvina kubatsira kuti Microsoft, ichiona kukundikana kwesarudzo yayo yeSilverlight, yakafunga kujoina kuedza kusundira iyo HTML5 standard. Uye ngatitaurei zvese, Vatsvagiri vakasangana nematambudziko ezvekuchengetedza rinenge mazuva ese.
Mumakore gumi aya, Makambani eInternet aive achidzikisa rutsigiro rwavo rweFlash uye, panguva imwechete, achiwedzera rutsigiro rweHTML5. Mahombe mabhurawuza akafanana Chrome neFirefox ikozvino bvisa zvese zveFlash zvemukati nekutadza
Statistics inoratidza izvozvo asingasviki 5% emawebhusaiti achiri kushandisa Flash yezviri mukati, kubva pa30% muna 2011. Saka zviri pachena kuti hapana munhu anozoziva kana vasinga verenge Linux Vakapindwa muropa.
Pakutanga mwedzi uno, Adobe ndiye akabatwa nechiitiko chakakomba chekuchengetedza chakaburitsa ruzivo rwevanhu vangangoita mamirioni 7,5 vashandisi veCreative Cloud dhizaini yekushandisa. Icho sevhisheni sevhisi yezvishandiso zvakaiswa pakombuta kana nhare, uye zvimwe zvinomhanya mukati megore.
Haisi nguva yekutanga kuitika. Ndakanga ndatova nematambudziko ekuchengetedza makore mashoma apfuura. Ini ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika, imwe yeakakanganiswa maemail kero yaive yangu uye ini ndakazadzwa nezvakasiyana zvinopihwa zvekuwedzera uye machinda eNigeri.Musabvunze zvandiri kunyora posvo iyi.
Maererano nekambani yekuchengetedza Comparitech, Adobe haina kuchengetedza Elasticsearch server kune iyo inogona kuwanikwa kubva pawebhu pasina chikonzero che password kana kusimbiswa. Dambudziko rakawanikwa muna Gumiguru 19, uye rakagadziriswa neAdobe nekukurumidza payakataurwa nevanoongorora nezvekuchengetedza.
Iyo yakafumurwa dhatabhesi yaisanganisira ruzivo senge maemail kero, zuva rekugadzira account, zvigadzirwa zvakaverengerwa mukunyorera, chinzvimbo chekunyorera, kuteedzera kubhadharisa, data renhengo dzemunhu, nyika yekwakatangira, nguva yakapfuura kubva pakupinda kwekupedzisira uye kuti vanga vari vashandi veAdobe.
The database iyo yaisanganisira mapassword kana ruzivo rwemari. Mhedzisiro inogona kuburitsa kuburitsa kwakadai ndeye iko kushandiswa kwemaemail kuyedza kubiridzira phishing kune zvakanangwa.
Sekureva kwevakafumura dambudziko
Scammers vanogona kutevedzera Adobe kana kambani inoenderana nekunyengedza vashandisi kuti vape rumwe ruzivo, senge mapassword. Naizvozvo, zvakakosha kuti vashandisi vagadzire maviri-echinhu kusimbisa kuti vawedzere yechipiri dura rekuchengetedza account.
Nhau dzakaipa dzeAdobe uye yeavo vedu vane Unyanzvi hweKwayedza gore
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nhau dzakaipa dzeAdobe. Ita wega wega mushandisi data kuruzhinji uye Google ichivhara Flash zvemukati